Sanatria dia ho fisarahana ve????
Date: 21 août 2017 - 11:40
Tsy aiko raha efa nisy tratra toan'ny nahazo aho ianareo.
Izao ilay tantara
Indro aho izay no tsy nahavita nanao RS tamin'ny vadiko, izaho vehivavy.
Ny voalohany, tena reraky ny tontolon'androko aho tamin'izay, ny zaza moa mbola ninono ka rehefa hariva iny aho dia mahatsiaro tena torovana, nifanafosafo teo izahay mivady, natsofoko tany amin'ny patalohany ny tanako, izaho anefa efa tena te-atory faran'izay mafy ka dia resin-tory teo aho, izy nanantena zavatra be anefa tsy nahavita inona izahay, rehefa alin'alina iny taitra tampoka aho, izy efa manome lamosina no hitako. Nilongilongy be tamin'izay ary 1 semaine vao niresaka tamiko.
Faharoa vao tamin'ny dimanche teo, sendran'izao indray aho, aleo hoy aho rehefa avy eo isika manao RS fa haka aina kely lu za, fa tena tsy taitra indray aho ary efa aiko fa ho tezitra izy. Tanikeo izy nandeha tsy nisakafo maraina.
Mba ampio aho fa mety hitady any amin'ny hafa izy raha mitoy izao, anefa tsy fidiny ho ahy koa ilay izy.
Re: Sanatria dia ho fisarahana ve????
Date: 21 août 2017 - 15:10
aza miasa saina be laotra, Marina fa hoe ts mora le iz,
fa raha tena soudé nareo mivady ts tokon ampisy olana @nareo zany,
resaho mora2 fotsiny iz ze fetseponao hoe reraka enao , mety hahita vahaolana mihitsy ar nareo ,(partage de tache, planning de sexe...) rehefa tezitra izy aza tonga de valina koa n antezerany fa resao mora,
n ahy ref ten ts mahavita de zay zan fa n hapitso mihezaka ny manao tsara ,mody asiana partie dance , na sakafo, na ankajo sexy...
reste cool madama, aza mitady areti-po, fa na omenao eo faona ar io ref te ande iz de ts voatazona, crois mois, j en connais des exemples, Enao faona no reraka eo!
Date: 25 août 2017 - 09:25
Abigaelle>>>>>>Aza atao mahakivy zany fa fombanjavatra. Zao atao, rehefa fantatrao hoe ho tonga avy miasa izy dia hisikino lambahoany dia String atao anatiny dia manaova sexy mihintsy. Ho hitanao eo ny vokatra. Tsy tonga amin'ny fisarahana izany fa minime, fa mahaiza mifampikarakara sy mifamboraka ny ao ampo amin'ny fo tony sy feno fitiavana.
Date: 25 août 2017 - 09:53
Abigaelle : Mpivady vao koa angamba ianareo roa é ? Tena izany ve no ilonjolonjoan'ilehiry herinandro ? Dieny izao, miresaha tsara ianareo roa, izany hoe araka ny toro-hevitra etsy ambony, ianao no manazava aminy fa tsy voatery ho ny sitra-pony foana fa misy fotoana ianao mba reraka !
Tsy manakivy aho fa ny vadinao io izany ilay karazana lehilahy mihidy toy ny huître rehefa misy zavatra mahasorena azy ! Dia ho ianao foana no manokatra azy (huître) sy manazava, manao premier pas rehefa misy tension !
Sarotra no miala amin'io toetra mikatona io !
Date: 25 août 2017 - 10:12
Abigaelle>>>>>>Marina io tenin'ny manampy io.
Azo atao koa anefa izao, toy ny nanaovako ny ahy. Izy ilay somary hitanao vizambizana amin'ny asany iny, dia ianao indray no mangataha Rs aminy. Iniana atao io amin'ny fihetsika tena manintona azy dia ho hita eo hoe hitaraina ve izy hoe vizana sa tsia...Dia miresaka amin'ny fo feno fitiavana avy eo raha tsy mety izy. Ampahafataro azy fa mahavita kilaometatra maromaro ianao mijanona mikarakara zazakely sy ny vadinao ao antrano amin'ny raharaha rehetra saingy tsy tsampan'ny lehilahy tia tena mihintsy izany, dia hazavao aminy. Rehefa mijanona weekend ao antrano ianareo roa dia ataovy izay mahavizana azy Rs maraina, Rs hariva dia ho tsampany ny atao hoe reraka.
Par: mivonona tsara
Ho fanampin'ny fifampiresahana mikasika ny raharaha an-tokatrano izay tena zava-dehibe tokoa, dia izao no hevitro. Isika vehivavy mila vonona ara-tsaina koa mikasika ny firaisan'ny mpivady. Indraindray isika reraka dia tsy tiantsika na dia ny hokasikasihany fotsiny aza. Ilay havizanana foana no tanisaina ao an-doha dia vao mainka kely ny hery sy ny fahazotoana handraisana ilay vady. Rehefa miverimberina iny fihetsika iny dia misy fiatraikany amin'ny lehilahy ihany satria mahatsiaro tsy tiana izy.
Tsy sanatria atao asa an-terivozona no tiako ambara, fa ataovy an-tsaina ohatra fa tinao io vadinao io ary mahafinaritra anao ny firaisana ataonareo. Andramo fa manova zavatra be io ary na ianao ary avy eo mankafy satria entim-pitiavana.
Tsy dia mety amiko ilay hevitry Beby aloha, toy ny hoe "faizina" sy atao leo mihitsy ve izy. Fa saingy hoe samy manana ny nandaitra taminy.
Date: 11 septembre 2017 - 11:56
ny an beby ne ts oe faizin e, fa apetrak amle placenul rerak le lhlh d mb icomprendre iz amzay, nenà ndray an, zah ten reradav fa tenenk fotsn rams oe reRak za fa mba atovy service tsotsotr na aleo lu idodo kel d mfuh marain beu tsik, d mety tsara mints
Date: 11 septembre 2017 - 13:59
hahaha aoana indray ilay hoe hisikino lambahoany samy manana ny fieritreretany izany hoe sexy izany tokoa a,
ny an'i beby izany string sy lambahoany ny sexyany dia ny anao indray efa fantatrao hoe inona no mety tiany dia @ izay tian'ny ny anao no ataovy fa sao dia tsy mitovy fitiavana ny lhl ny beby sy ny anao kou
sa ny lehilahy mitovy daholo?
Date: 12 septembre 2017 - 11:39
mipetraha ianao eo @ toerany de vita, ianao ihany manome solution ho an'ny tenanao!